5 Fialam-boly nankalazaina ho an'ny Advent
Tao anatin'ireo taona vitsy lasa izay, ny fety isan-karazany dia nitombo hatrany ny lazany. Be loatra ka misy safidy ho an'ny mpankafy mozika, mpilalao sarimihetsika, film buffs, ary zavatra hafa. Fa fantatrao ihany koa fa misy fety lehibe maromaro natao ho an'ireo mpankafy an-trano an-trano koa? Ireto misy fiaraha-mikorana dimy izay tena mendrika hatao.
Outessa dia fetibe an-trano an-trano fotsiny. Christin Healey
Ampirisihin'ny mpivarotra antsinjarany REI, Outessa dia fetiben'ny fampisehoana natao - ary nifantoka manokana - vehivavy. Ny foto-kevitra ao ambadiky ny tetikasa dia ny mamorona toerana iray feno habaka, an-jorom-bala ary mahafinaritra ho an'ireo vehivavy mpinamana mba hiara-hivory, hizara zava-mahagaga mahatalanjona, ary hifandray amin'ny any ivelany amin'ny fomba manokana.
Ireo mpandray anjara dia mamorona fandaharam-potoana manokana ataon'izy ireo izay ahitana ny zava-drehetra avy amin'ny yoga sy kayak mankany amin'ny lalana mihazakazaka sy mitaingina vato. Mpitarika sy mpampiofana matihanina no miezaka manome ny taona ho an'ny mpanatrika amin'ny faharetany, fa mba hiantohana ihany koa amin'ny fomba azo antoka sy azo antoka.
Ary aorian'ny andro lava mahafinaritra eny an-tokotany, dia afaka mameno ny sakafo amin'ny sakafo tsara, ny divay tsara, ary ny orinasa goavam-be ny mpandeha, ka tsy misy ankizilahy.
Toerana: Kirkwood, CA; Mt. Hood, WA, ary Waterville Valley, NH
Vaovao ho an'ny 2017, ny Fikatsahana ny Fikomiana Camelbak dia fetibe mandritra ny telo andro izay natao hanomezana fahafaham-po ireo mpandeha mahafinaritra mba tsy hanatsara ny fahaizan'izy ireo amin'ny hetsika ivelan'ny anjerimanontolo, fa hahita vaovao vaovao koa. Ny safidy dia ny hikatso-dranomasina, ny bisikileta mamakivaky tendrombohitra, ny paddleboard mijoalajoala, ny rock climbing and more. Ireo mpampianatra nahazo kalitao dia an-tanana ny hampianatra ireo kilasy amin'ny zava-drehetra avy amin'ny fitaovana mahazatra amin'ny navigation mankany amin'ny fiverenana an-tanindrazana. Ary amin'ny fiafaran'ny andro, ireo mpandray anjara dia afaka misafidy ny hijanona eny amin'ny trano na hijanona ao amin'ny hotely malalaka.
Mazava ho azy fa ny ampahany amin'ny fialam-boly amin'ny fety rehetra dia mampifandray amin'ireo mpandray anjara mitovy hevitra aminy. Ny andian-dalan'ny fanenjehana dia mihodina isan'andro amin'ny mozika mivantana, sakafo matsiro, zava-pisotro, ary fotoana maro hiarahana amin'ny hafa. Tsy vitan'ny hoe hivoaka miaraka amina fanentanana vaovao ivelan'ny trano ianao, fa afaka manao namana tsara eny an-dalana ihany.
Toerana: Salt Lake City, UT ary San Francisco, CA
Mpandray anjara mavitrika amin'ny hetsika ivelan'ny "Questival". Cotopaxi
Nokolokoloina sy nokarakarain'ny mpanara-maso sy ny mpanamboatra fiaramanidina mpiantoka Cotopaxi, ny fandaharam-potoana dia fandaharam-pandresena 24 ora natao hanampiana ireo mpandray anjara ho any amin'ny toerana lavitra indrindra, ary manana karazana fahafinaretana eny an-dalana.
Manangona ekipa roa na enina amin'ireo namanao tianao indrindra ary mifaninana amin'ny hetsika goavambe ahitana tarika tsotra fotsiny amin'ny toerana iray sy faritra manodidina, ho an'ny fanamby sarotra kokoa any ivelany toy ny fihodinana am-pitoerana. Ny fampiharana ho an'ny iOS sy Android dia manampy ireo mpandray anjara handamina ny paikadiny ary hahita ny safidy amin'ny fanamby hifaninana, ary mandritra ny andro ahafahan'izy ireo mifidy izay tadiaviny. Ireo mpandresy koa dia afaka mandray ny fitaovana maimaimpoana maimaim-poana ary mandresy fitsangatsanganana am-pilaminana. Fihetseham-po mivantana sy antoko-tarihin'ny lozam-pifaneraserana no mameno ny fety
Toerana: Tanjona amin'ny fandevenana manerana an'i Etazonia sy Kanada
Ny ankamaroan'ny fetin'ny ririnina dia atao ao an-tanàn-dehibe na any an-tanàn-dehibe, ary manampy azy ireo hahatakatra kokoa an'ireo izay maniry hanatrika azy. Na izany aza, ny Indiana Dunes Outdoor Fest dia miorina eo amin'ny Indiana Dunes National Lakeshore, izay andalana 15 kilaometatra maromaro amin'ny morontsiraka atsimon'ny Lake Michigan.
Araka ny efa nantenainao, ny fetibe dia ahitana safidy ho an'ny fanatanjahan-tena, fiarandalamby ary bisikileta eny amoron-dranomasina, miaraka amin'ny geocaching, sary, orientation, ary ny fiakaran'ny vorona koa amin'ny fandaharam-potoana. Na dia misy fotoana iray aza mandeha amin'ny fitsangatsanganana an-dalamby amin'ny alina izay tsy mpinamana tsotra fotsiny, fa manome ny mpandray anjara hanofa fiaramanidina izay mety ilainy ihany koa.
Toerana: Indiana Dunes National Lakeshore, IN
Mipetraha any amin'ny Camp Base. Fetiben'ny kintana
Mpitsidika am-pirahalahiana mipetraka any Royaume-Uni na mikasa ny hitsidika ny firenena, mety te hanampy ny Fetiben'ny Camp ao amin'ny lisitr'ireo zavatra hitanao sy ataony. Nandritra ireo roa taona lasa izay, nihalehibe ny fisehoan-javatra ho an'ireo tia an-kalamanjana, tsy ho an'ny hetsika rehetra omen'izy ireo, fa noho ny fisintonan'ny mpandray vahiny vahiny ihany koa. Raha toa ka tsy ampy ny fitaovam-pandehanana, ny fandehanana mandehandeha, ny fitsangatsanganana, ary ny bisikileta dia ny mba hahatonga anao ho fitaomam-panahy, ireo mpandray anjara koa dia manana fahafahana hihaona sy hiresaka am-pivarotana amin'ny mpikaroka vaovao manerana izao tontolo izao koa. Ireo lehilahy sy vehivavy dia hizara ny tantaran'ireo avana mampidi-doza manerana ny vazan-tany manerana an'izao tontolo izao, sady manome torohevitra momba ny fomba hanombohana ny asa fikarohana.
Ny fetibe dia fantatra ihany koa amin'ny famoahana atrikasa maimaim-poana maro hampidirana ny mpandray anjara amin'ny fanatanjahan-tena vaovao, anisan'izany ny famolavolan-dàlana, ny fihenam-bidy, ary ny fiakarana an-dalambe. Ny seminera hafa dia ahitana safidy amin'ny fianarana voalohany ny fanampiana tany an-tany efitra, ny fitadiavana tombontsoa ho an'ny fahatongavana, ary ny fomba hanaovana drafitrasa.
Toerana: natao tao amin'ny distrikan'i Peak ao Royaume-Uni
Gear Revue: Granite Gear Cross-Trek 26 "Wheeled Duffel
11 Fialantsasatra Ara-panahy ho an'ny Mpikomy
Fialam-boly fanaon'ny vehivavy: Ny fitsangantsanganana tsara ho an'ny vehivavy
The 11 Most Aboriginal Activities in Dubai
Lesona 9 Nianaran'ny Kilimanjaro niantsinanana
Ny Torolalana Manolotrana An-dalana ho an'ny bisikileta
Inona no i Jet Lag?
Ny toerana 9 tsara indrindra ho any Seattle
Jazz Clubs any Buenos Aires
Profile of Greenfield Village ao amin'ny Dearborn Michigan
Londres ho an'ny Derby amin'ny fiaran-dalamby, bus ary fiara
Hitady valan-drongony avy amin'ny fanjakana amerikana
Mankalaza ny Paska any Phoenix
Inona no tokony hataonao mialoha, mandritra ary aorian'ny rivo-doza?
Ny zavatra tokony hatao amin'ny Taom-baovao amin'ny New York
Hetsika Ivotoerana tsara indrindra any Shina
Fivoriana amin'ny faran'ny herinandro mandritra ny herinandro 2017 ao amin'ny faritra Washington, DC
Fianarana torohevitra any ivelany
Palm Beach Pridefest 2016 - Lake Pride Gay Pride 2016